September, 2021 - Sports myanamr - Page 13
ဗိုလ်လုပွဲ ကစားရမယ်ဆိုရင် ရိုနယ်ဒို အစား ဟယ်ရီကိန်း ကိုပဲ ရွေးမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အဘွန်လဟော်
September 4, 2021 - by Editor
ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တကျော့ပြန် ခရီးဟာ လတ်တလော သတင်းတွေရဲမျက်နှာဖုံး ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ် ။ အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကို နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ အပြီး ၁၂ နှစ် အကြာမှာ နောက်တခေါက် ပြန်ရောက် လာတဲ့ ရိုနယ်ဒို ဟာ ၃၆ နှစ် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး အရင်လို …
ရိုနယ်ဒို လား . . . အင်နီယေစတာ လား . . . ဂျော်ဂျင်ဟို ဘယ်လမ်းစဉ်ကို လိုက်မှာလဲ ?
September 3, 2021 - by Editor
ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ဂျော်ဂျင်ဟို အတွက်တော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဟာ အရမ်းကို ဝမ်းမြောက် ပျော်ရွှင် စရာ ကောင်းတဲ့ နှစ်တနှစ် ဖြစ်ခဲ့တာ အသေအချာပါပဲ ။ ဒီနှစ် ထဲမှာ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ကလပ် မှာရော နိုင်ငံ အသင်းမှာပါ အမြင့်ဆုံး အောင်ပွဲတွေ ဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် နဲ့ …
စပိန် ကို အနိုင်ယူကာ အုပ်စု ပထမနေရာ ယူပြီး ခြေစစ်ပွဲအောင်ဖို့ အလားအလာ ကောင်းလာတဲ့ ဆွီဒင်
ဆွီဒင် လက်ရွေးစင် အသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ မှာ နာမည်ကြီး စပိန် အသင်း ကို အိမ်ကွင်းမှာ ၂ – ၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီလို အနိုင်ရမှုဟာ ဆွီဒင် ကို အုပ်စု ဘီ ရဲ့ ပထမ …
ပရီးမီးယားလိဂ် တကျော့ပြန် ခရီးမှာ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရယူသွားနိုင်တဲ့ ထူးရှယ်မှတ်တမ်းတခု
September 2, 2021 - by Editor
အိုးထရက်ဖိုဒ့် ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကနေ ထွက်ခွာသွားအပြီး ၁၂ နှစ် အကြာမှာတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ တချိန်က သူ ၆ ရာသီကြာအောင် ကစားခဲ့တဲ့ လိဂ် ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ ပါပြီ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ရိုနယ်ဒို …
အသုံးမလိုတော့တဲ့ ကစားသမား အများအပြား ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ အနှစ်ချုပ်
၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ဘောလုံး ရာသီ အတွက် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက် ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ၊ ဗြိတိန် စံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီ အချိန်မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ။ ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး ကလပ် ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ …
OFFICIAL – လက်ရွေးစင်ဘောလုံးလောကရဲ့ ထာဝရ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဖြစ်လာတဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို
September 1, 2021 - by Editor
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းကမှ ယူနိုက်တက် ကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ ရိုနာဒို ဟာ မနေ့ညကပဲ ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲစဉ် ဝင်ရောက် ကစားရင်း ဘောလုံးသမိုင်းကြောင်း တလျှောက် လက်ရွေးစင် ကစားသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုး အများဆုံး သွင်းယူထားနိုင်တဲ့ ကစားသမား အဖြစ် မှတ်တမ်းသစ် ရေးထိုးသွားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ …
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ကို တကျော့ပြန်ရောက်လာတဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ အင်တာဗျုးအပြည့်အစုံ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ ထွက်ခွာ သွားအပြီး ၁၂ နှစ် အကြာမှာတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ တချိန်က သူ အောင်မြင် ပျော်ရွှင် ခဲ့တဲ့ နေရာဟောင်းကို ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ကတော့ မထင်မှတ်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့မှုဟာ ဒီနှစ် နွေရာသီ အတွက် အကောင်းဆုံး …
ဥရောပ ဘောလုံး ရဲ့ ၂၀၂၁ – ၂၂ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကတော့ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာပဲ တရားဝင် ပိတ်သိမ်း သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗြိတိန် ဒေသ အတွင်း မှာတော့ စာရွက် စာတမ်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ဖို့ အချိန်ပေးထားပြီး အခြား ဥရောပ …